Wararka - Laydhka muraayadda muraayadda sabaynaysa-Roob barafaysan
Algorithm waa muujinta maansada xisaabta ee dabeecadda. Naqshadeynta nalka ee Toan nguyen ， waa koox xiddig caalami ah oo umuuqda inay dhex sabeynayaan meel sida shimbiro adhi ah, ama roob qabow qabow ah. Nidaamku wuxuu bixiyaa halabuur aan dhammaad lahayn oo laambadaha wareega lagu hakin karo meelo kala duwan oo laga soo raro barroosinka mesh tuubbada - shabakadda qaab-dhismeedka birta ah ee soo saaraysa hooskeeda iyo muuqaalkeeda u gaarka ah.
Iftiimintu waxay u muuqataa sida koox xiddig oo adduunka ah oo dhex sabaynaysa sidii adhi shimbiro ah, ama roob qabow
Ujeedadu ma ahayn in la naqshadeeyo shey gebi ahaanba qeexan oo 'dhammeeyey', laakiin waa qalab u oggolaanaya macmiil kasta inuu abuuro nidaamkiisa nalal u gaar ah, ee la xiriira meesha dhismaha, aagga laydhka iyo nooca la doonayo ee 'qaab muuqaal ah, ayaa leh naqshadeeye Toan Nguyen.
'algorithm' ayaa u oggolaanaya kuwa inay ka joojiyaan adduunka meelo kala duwan si ay u abuuraan naqshad nal firfircoon
dunnidu waxay ka samaysan tahay muraayad la afuufay oo waxay ku muujinayaan naqshad dusha sare ah
qaab kale 'algorithm'
Adduun kasta waxaa lagu dhejiyaa 2W LED
Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso inuu laambadani qaali noqon doonto oo adag. Xaqiiqdii, waxaad ku heli kartaa kuwa qiimo aad u hooseeya. Sababtoo ah qof kastaa wuxuu heli karaa qaybo ka mid ah taxanahan si fudud.
Si kastaba ha noqotee, barta muhiimka ah ee laambadani maaha qaybta kareemka ama LED-yada, Waxay ku saabsan tahay algorithm. Sida loogu meeleeyo meel kooban.
Dhab ahaan, waxaa jira qaab quraarad ah oo loogu talagalay laalaadka, iyo CCT-ga hogaaminaya iyo watts ayaa si gaar ah loo samayn karaa.
Sida soo saaraha nalalka caadada u ah, had iyo jeer samee waxyaabo aan ku fiicanahay.
Waqtiga dhejinta: Feb-05-2021